KASHIFAAD: KENYA oo shaaca ka qaaday arrin sir ah oo ku saabsan wafdigii ka qeybgalay caleema saarka Axmed Madoobe! | HalQaran.com
KASHIFAAD: KENYA oo shaaca ka qaaday arrin sir ah oo ku saabsan wafdigii ka qeybgalay caleema saarka Axmed Madoobe!
Bixid, Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta /Sawir hore/Keydka Halqaran.com
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay raali ka aheyd wafdigii Kenya ay u dirtay Ka qaybgalka xafladii Caleemo saarka aheyd ee Madaxweynaha Jubbaland.
Xoghayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau ayaa BBC u sheegay dowladda Soomaaliya wafdigaasi inay ogayd oo ay ka sii war haysay.
Kenya waxa ay sheegtay doorashadii ka dhacday Magaalada Kismaayo inay aheyd mid xalaal ah, islamarkaana si nabdoon ku dhacday.
Wuxuu kaloo hadalkiisa raaciyay Macharia, ”Diyaaradaas la sheegay in ay tahay diyaarad laga leeyahay dalka kenya, ma ahayn sidaas oo waxay ahayd diyaarad yar oo ay Soomaali leedahay, mana jirto in diyaaradaas ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya”.
Dowladda raali ayay ka aheyd
xafladii Caleemo saarka Axmed Madoobe